Okudingwa Abanikazi Bebhizinisi be-Ecommerce Nge-Shopify SEO | Martech Zone
NgoLwesithathu, Septemba 13, 2017 Douglas Karr
Usebenze kanzima ukwakha iwebhusayithi yakwaShopify lapho ungathengisa khona imikhiqizo ekhuluma nabathengi. Uchithe isikhathi ukhetha itimu, ulayisha ikhathalogi yakho nezincazelo, futhi wakha uhlelo lwakho lokumaketha. Kodwa-ke, noma ngabe isayithi lakho libukeka lihlaba umxhwele kangakanani noma ukuthi kulula kangakanani ukuzulazula, uma isitolo sakho se-Shopify singenziwanga injini yokusesha, amathuba akho okuheha izilaleli zakho ohlosiwe mancane.
Akunandlela yokuzungeza: i-SEO enhle iletha abantu abaningi esitolo sakho se-Shopify. Idatha ehlanganiswe ngabakwaMineWhat ekuthole lokho Ama-81% wabacwaningi abathengi umkhiqizo ngaphambi kokuthenga. Uma isitolo sakho singabonakali siphezulu emazingeni, ungaphuthelwa ukuthengisa - noma ngabe imikhiqizo yakho ikhwalithi ephezulu kakhulu. I-SEO inamandla wokufaka amakhasimende ngenhloso yokuwathenga, noma ukuwasusa.
Okudingwa Yisitolo Sakho Sokuthenga
Zonke izitolo zakwaShopify zidinga isisekelo esihle se-SEO. Futhi zonke izisekelo ze-SEO zakhiwe ngamagama angukhiye amahle. Ngaphandle kwe- ucwaningo lwamagama amakhulu, awusoze wakhomba izethameli ezifanele, futhi uma ungakhombi izethameli ezifanele, amathuba akho okuheha abantu okungenzeka ukuthi bathenga mancane. Ngaphezu kwalokho, lapho wazi ngocwaningo lwakho lwegama elingukhiye, uzokwazi ukusebenzisa lolo lwazi kwezinye izindawo zebhizinisi, njengokumaketha kokuqukethwe.
Qala ucwaningo lwakho lwamagama angukhiye ngokwenza uhlu lwamagama angukhiye ocabanga ukuthi ahambisana nebhizinisi. Yisho ngqo lapha - uma uthengisa izinto zehhovisi, lokhu akusho ukuthi kufanele ubhale amagama angukhiye emigomo ehlobene nokunikezwa kwehhovisi yemikhiqizo ongayithengisi. Ukuthi iheha abantu abanentshisekelo yokuhlinzekwa ngamahhovisi, akusho ukuthi bazokuthokozela ukuya kusayithi elingenawo umkhiqizo abawufune ekuqaleni kuGoogle.
Sebenzisa amathuluzi wokucwaninga wamagama asemqoka ukukusiza ukhothoze imininingwane efanele mayelana namagama wakho angukhiye angaba khona. Amathuluzi wokucwaninga wamagama asemqoka akutshela ukuthi yimaphi amagama asemqoka kakhulu, futhi yimaphi amagama angukhiye anomncintiswano ophansi kakhulu, ivolumu, kanye nedatha yokuchofoza ngakunye. Uzokwazi futhi ukusho ukuthi yimaphi amagama asemqoka asetshenziswa izimbangi zakho kumakhasi wawo athandwa kakhulu. Iningi lamathuluzi wokucwaninga ngamagama asemqoka anikela ngezinguqulo zamahhala nezikhokhelwayo, noma kunjalo, uma nje ufuna ukuhlola ukuthi kusebenza kanjani, ungasebenzisa i- I-Google Keyword Tool Planner.
Yenza Izincazelo Zomkhiqizo Ohlakaniphile
Lapho usuqonde kahle ukuthi yimaphi amagama asemqoka okudingeka uwasebenzise, ​​ungawasebenzisa encazelweni yomkhiqizo wakho. Kubalulekile ukuthi ugweme ukugxila igama elingukhiye encazelweni yakho. I-Google iyazi uma okuqukethwe kungekona okwemvelo, futhi uzothola isijeziso ngokwenza lokho kuthutha. Eminye imikhiqizo oyithengisayo ingabonakala ngathi iyazichaza; isibonelo, isitolo sakho sehhovisi singaba nesikhathi esinzima sokuchaza izinto ezinjenge-staplers nephepha. Ngenhlanhla, ungazijabulisa ngezincazelo zakho ukwenza izinto zibe zinhle (bese uzifaka enkambisweni).
I-ThinkGeek ikwenzile lokho ngebanga elide incazelo ye-flashlight elula ye-LED lokho kuqala ngomugqa: “Uyazi ukuthi yini okuhlekisayo ngamathoshi avamile? Ziza ngemibala emibili kuphela: mhlophe noma lowo mhlophe ophuzi osikhumbuza amazinyo ophuzo lwekhofi oluthanda kakhulu. Lumnandi kangakanani lolu hlobo lwethoshi? ”
Khuthaza Ukubuyekezwa Okuvela Kubathengi
Uma umema amakhasimende ukuthi ashiye izibuyekezo, udala ipulatifomu yokusiza ukukhuphula izinga lakho. Eyodwa Ucwaningo lweZenDesk ithole ukuthi ama-90% wababambiqhaza athonywe ukubuyekezwa okuhle online. Olunye ucwaningo lukhombisile okutholakele okufanayo: ngokwesilinganiso, iningi labantu lithemba ababuyekezi abakwi-inthanethi njengoba nje bethemba izincomo ezenziwa ngomlomo. Kubalulekile ukuthi akuzona kuphela lezi zibuyekezo kuzingxenyekazi zokubuyekeza, kepha nasemakhasini wakho womkhiqizo. Kunezindlela eziningi zokwenza lokhu qinisekisa amakhasimende ukuthi abuyekeze ibhizinisi lakho; linganisa izinketho zakho, bese uthola ukuthi iyiphi indlela efanele ibhizinisi lakho.
Ukuthola usizo lwe-SEO
Uma konke ukukhuluma nge-SEO kukuhlula, cabanga ukusebenza nenkampani yezokumaketha noma i-ejensi ukukuqondisa endaweni efanele. Ukuba nochwepheshe ohlangothini lwakho kukuvumela ukuthi ufunde kabanzi ngamasu angemuva kwe-SEO, futhi ugxile kakhulu kumkhiqizo wakho, futhi uhambise umuzwa omuhle wenkonzo yamakhasimende.
Ngokusho kwe-SEOInc, i Inkampani yokubonisana ne-SEO eSan Diego, amanye amabhizinisi akhathazeka ngokusebenza ne-ejensi ngenxa yokwesaba ukuyeka ukulawula, kepha lokhu akunjalo - inqobo nje uma usebenza nenkampani enedumela elihle.
I-Shopify isibe yinto ephezulu yokuthengisa online. Ngenxa yokubaluleka okwandayo kokushayela kwamakhasimende kumasayithi anikwe amandla yi-Shopify, i-Shopify SEO ibilokhu ikhula ngokushesha eminyakeni yamuva nje futhi kulindeleke ukuthi iqhubeke nokukhula kakhulu. I-SEOInc
Ungaze ucabange nokusebenza no-freelancer onolwazi onamakhono okukhombisa ku-SEO kanye nephothifoliyo ebanzi. Noma ngabe uthatha ini, khumbula ukuthi i-SEO yinto edinga ukwenziwa kahle, futhi ngaphandle kokuthi ungachitha isikhathi ufunde amaqhinga amahle kakhulu futhi uwasebenzise ngempumelelo, kungukutshalwa kwemali okungcono ukudlulisela lawo makhono kwelinye iqembu.
Tags: i-ecommerce seoucwaningo lwegama elingukhiyeyenza ngcono i-shopifyseolokhothengathenga lokhongobe
I-Izotope RX: Ungawususa Kanjani Umsindo Wangemuva Kokuqoshwa Kwezwi Kwakho
Sep 24, 2017 ngo-1: 17 PM
Isayithi Elihle! Ukuthanda okuqukethwe kwakho!
Nov 22, 2017 ngo-1: 21 PM
uthande lo mhlahlandlela. ngibonga kakhulu ngokwabelana